Fividianana trano ao Dubai - mahalala ny zava-Drehetra amin'ny Dubai real Estate - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Fividianana trano ao Dubai - mahalala ny zava-Drehetra amin'ny Dubai real Estate
Ampidiro ny anaram-pikambana na adiresy mailaka Dia handefa anareo mialoha fifantenana avy amin'ny mailaka Koa, ho fantatsika, fa ny broker (broker) toy ny orinasa mety ny manolotra ny fananana manontolo eny an-tsena ary ny zava-dehibe indrindra dia ny manolotra ny fananana ho an'ny mpanohana nefa tsy voatery mandoa vaomieraEfa mihoatra ny folo taona ny traikefa, coaching amin'ny teny frantsay, teny anglisy sy arabo, ary matihanina fanaraha-maso amin'ny tsy misy vola fanampiny. Izany no tena ilaina raha toa ka manana tombontsoa hampiasa vola ao Dubai, tonga hahita ny firenena, dia tena mahatsiaro ny tarehy sy ny endriky ny fitsarana. Na izany aza, raha toa ianao ka efa zatra Dubai, nanana kaonty any amin'ny banky ao an-toerana, dia azo atao ny manao ny raharaham-barotra, teny lavidavitra. Mikasa ny ho any Dubai, dia mifandraisa antsika amin'ny alalan'ny fanomezana antsika ny daty ny hijanona, ny fisian'ny.
Ny birao dia hita eo akaikin'ny toeram-Pivarotana lehibe Ny Mitambatra ao amin'ny distrikan'i Al Barsha, na izany aza, dia afaka isika hihaona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Matetika ny fotoana voalohany atao ao amin'ny dingana telo:- Fanolorana ny Dubai, sy ny real estate tsena - Fitsidihana ny toerana lehibe mba haka hevitra momba ny tanàna- Fitsidihana ny trano voafaritra nandritra Ny fitsidihana ny trano dia mety haka ny toerana nandritra ny andro maromaro, raha tsy mahita ny fananana ianao te.
Ity karazam-kaonty dia manome anao ny mety ho petra-bola ny vola eo amin'ny tantara.
Ny fanokafana ity karazana kaonty dia nentina nivoaka haingana indrindra ary izany dia mamela anao mba hamindra vola avy any ivelany sy ny olana banky taratasim-bola (ny"Mpitantana ny Cheque"). Mba hanokafana kaonty any amin'ny banky ao Dubai, dia mila ny enin-fanambarana ny tantara tany am-boalohany ny banky sy ny hamarinina. Ny taratasy fanamarinana tany am-boalohany firaketana an-tsoratra dia tsy maintsy atao mivantana ao amin'ny banky mba hanamarinana fa ara ny fanambarana ny kaonty.
Ao ny zava-nitranga dia miaina amin'ny teny anglisy firenena, dia afaka mangataka ny"banky momba ny taratasy"na taratasy ny banky momba ny milaza fa manana kaonty any amin'ny banky.
Isika dia hanomana MOU (Memorandum Ny fahazavan-Tsaina), izay mitovy amin'ny voasoratra fifanarahana eo mpividy sy ny mpivarotra (Marimaritra iraisana ny fivarotana). Ity tahirin-kevitra ity dia ahitana ny vidiny varotra, ny asa, ny daty ny famindrana ny fananan, isa ny pasipaoro ny mpividy sy ny mpivarotra. Amin'ny tranga izay dia mila fotoana mba hamindra ny anaram-boninahitra ny fananana, petra-bola ny folo ianao dia ho nangataka mba hitehirizany ny fananana. Ny mpivarotra manaiky ny manome NOC (Tsy Nanakana Taratasy) avy ao amin'ny real estate developer na ny mpitantana ny trano fonenana. Ny NOC dia ny taratasy avy any amin'ny mpanohana ny mpitantana, ka azo antoka fa ny mpivarotra dia manana zo hivarotra ny fananana, ary amin'izao fotoana izao amin'ny fandoavam-bola ny fiampangana rehetra. Indray mandeha ny antontan-taratasy rehetra dia nivory sy ny vola tonga any Dubai, dia hitondra anareo ho fotoana maha-Pananana, ny notary, neken'ny Tany Sampan-draharaha (Sampana ny governemanta izay miandraikitra ny famindrana ny fananana). Mpividy, ny Mpivarotra sy ny Mpandraharaha(s) hihaona amin'ny Pananana, sy ny raharaham-barotra, maka toerana. Ny notary fiampangana ny sarany ny tokony ho efatra ny fividianana vidin'ny. Isika hikarakara ny fanofana ny trano Asongadina ao amin'ny tranonkalany- ny Fitsidihana- Fandrafetana ny lease fifanarahana- Panjakana ny play- Famindrana ny hofan-trano eo amin'ny tantara, Na dia ny hividy fomba toa tsotra ampy amin'ny fampiharana, ny fanatrehan'ny mpandraharaha dia tena ilaina mba hahazoana ny raharaham-barotra.
Raha ny marina, ny farany ny amin'izay ho lany ny fandrafetana ny fivarotana fifanarahana, ary hanamarina ny nanaovana ny antontan-taratasy (MOU, NOC) sy ny ara-dalàna (Anaram-boninahitra ny fananana).
Ny mpandraharaha dia nahazo hery mba hanamarinana ny maha-azo itokiana ny fananana anaram-boninahitra. Ny tahan'ny vaomiera miovaova araka ny maha-voarohirohy ny mpandraharaha eo amin'ny raharaham-barotra. Dia manolotra anao ny mety manana real estate fanompoana la carte: ny raharaham-Barotra sarotra: quote: Raha ny fividianana dia atao amin'ny alalan'ny orinasa sy mitaky ny fidirana an-tsehatry ny sampan-draharaha ara-dalàna, ohatra. Ny asa toy ny real estate agent manomboka amin'ny voalohany hifandray sy mifarana amin'ny famindrana ny tompony. Ny tarehy ny real estate in Dubai-dia somary vao haingana, raha ny tena lehibe-taona, ny lalàna mamela ny vahiny mba hahazoana ny fananana manontolo ny tompony (freehold in Dubai). Satria io ny daty ny real estate in Dubai efa fantatra ny tsy mitsaha-mitombo ny fahalinana, hisarihana bebe kokoa ny mpilalao te ho maro ny manararaotra ny fampandrosoana mafy Dubai sy ny tarehy dia tsy mitsaha-mitombo (folo ny fitomboana efa ho enin-taona). Dubai no iray amin'ny real estate tsena manintona kokoa ny hividy trano:- Price soa mahasarika (tsy lafo vidy noho ny Paris, London, New York, ny Hong Kong na Singapour.)- Hetra tombony: tsy misy hetra- penthouse Trano amin'ny toetra tsara dia tsara vita sy ny foto-drafitrasa (farihy, fanaovana fanatanjahan-tena)- miverina fanofana ambony, eo anelanelan'ny dimy ka hatramin'ny folo NET- NY lalàna mankasitraka ny mpampiasa vola (Fanofana, ny fandoavam-bola mialoha)- ny firenena Iray eo amin'ny fampandrosoana mafy sy tsara fotodrafitrasa.
Ao ny zava-nitranga fa ianao dia te-hampiasa vola, na fotsiny no mila fanazavana fanampiny momba ny mividy trano any Dubai, fifandraisana Dubai real Estate, satria ankoatra ny manana ny fifidianana malalaka ny trano ao amin'ny malaza indrindra manodidina ny Dubai.
Isika dia hatolony ho samy hafa ny tetika ny fampiasam-bola mifanaraka amin'ny zava-misy, toerana sy ny fananany ny mety indrindra sy ny hiaraka aminao mandritra ny manontolo ny dingana mividy, avy amin'ny fikarohana ny famindrana ny fananana.
Fanamarihana: manana fahafahana Isika hanolotra anao manontolo ny fananana tsena ao Dubai. Ny entana misy ao amin'ny site dia maneho ampahany kely fotsiny ihany. DubaiImmobilier ny real estate ny vavahadin-tserasera momba in Dubai nanomboka tamin'ny taona. Niezaka ny real estate matihanina, monina ao Dubai neken'ny RERA fahazoan-dàlana mihoatra ny folo taona ny traikefa eo amin'ny fividianana, fivarotana, fanofana, ny fitantanana sy fampiasam-bola toro-hevitra ao Dubai.
Fitsipi-pitondran - mpisolovava
Estrictament Penal - crítica de la pel·lícula